हात्तीको आक्रमणबाट दुई जनाको मृत्यु, चार घाइते
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिकामा हात्तीको आक्रमणबाट दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने चार जना घाइते भएका छन् । मृत्यु हुनेमा महाकाली नगरपालिका–२ की ३८ वर्षीया वसन्ती भट्ट र ४० वर्षीया भुलीदेवी बोहरा भएको प्रहरीले बताएको छ । हात्तीको आक्रमणबाट सुनिता विष्ट, सरिता ओझा, ललिता बोहरा र उमा साउद घाइते
सागको समापन समारोहमा फुटबल प्रेमि रंगशाला बाहिर ( फोटो फिचर )
काठमाडौं । नेपालले ५१ स्वर्ण, ६० रजत र ९५ कास्य गरि कुल २०६ पदक जित्दै, १३औ दक्षिण एशियाली खेलकुद (साग) २०१९ काठमाडौ, पोखरा र जनकपुरमा सभ्य र भब्य रूपमा समापन भएको छ। खेलकुद को महाकुम्भ १३औं दक्षिण एशियाली खेलकुदको समापन ।
दशरथ रंगशालामा प्रहरीको लाठी चार्ज : दर्शक कुटिए, पत्रकारमाथि दुर्व्यवहार
काठमाडौं । टिकटका विषय विवाद हुँदा प्रहरीले दशरथ रंगशालामा लाठी चार्ज गरेको छ। नेपाल र भुटानबीच आज दिउँसो हुने साग फुटबलको फाइनल खेलका लागि टिकट लिन फुटबल समर्थक युवाहरु रंगशाला पुगेका थिए । टिकट सकिएको भन्ने जवाफ सुनेर आक्रोशित बनेका युवाहरुमाथि प्रहरीले लाठी चार्ज गरेको हो । प्रहरीले फुटबल समर्थक
आज ७१ औँ विश्‍व मानव अधिकार दिवस, राष्ट्रपतिद्वारा शुभकामना
काठमाडौंं। आज ७१ औँ विश्‍व मानव अधिकार दिवस, नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ। सन् १९४८ डिसेम्बर १० तारिखका दिन पहिलोपटक संयुक्त संघीय विश्वव्यापी मानव अधिकारहरूको घोषणा भएको थियो । सोही सम्झनामा विश्वभरि प्रत्येक वर्ष डिसेम्बर १० अर्थात आजको दिन यो दिवस मनाइन्छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी
काठमाडौं। १३औं दक्षिण एशियाली खेलकुद(साग) को आज समापन हुदैछ । समापन समारोह एक घण्टा ३० मिनेटको हुनेछ। १५ मंसीरदेखि जारी १३औं साग २४ मंसीरमा त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा फुटबलको फाइनलसँगै समापन हुनेछ। स्वर्ण पदकका लागि नेपाल र भुटानबीच दिउँसो तीन बजे पुरूष फुटबलको फाइनल खेल हुनेछ। फुटबल
साग अन्तर्गत आज १३ खेल हुँदै, महिला फुटबलको फाइनलका लागि नेपाल र भारत भिड्ने
काठमाडौँ । १३औैं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग अन्तर्गत आज १३ खेल हुँदैछन् । आज क्रिकेट, फुटबल, जुडो, पौडी, सुटिङ,स्क्वास, टेनिस आर्चरी, बास्केटबल, बक्सिङ, फेन्सीङ र कुस्तीमा प्रतिस्पर्धा हुदैँछ । कुस्ती खेल जनकपुरमा हुने छ भने महिला फुटबलको फाइनल पोखरा रंगशालामा हुने छ । महिला फुटबलको स्वर्ण पदकका लागि नेपाल
साग : जुडोमा नेपालले १ स्वर्ण र ४ रजत जित्न सफल
काठमाडौं । दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा जुडोमा नेपालले पहिलो स्वर्ण जितेको छ । जसमा नेपालका लागि देवीका खड्काले स्वर्ण जितिन । उनले फाइनलमा श्रीलंकाका खेलाडीलाई हराउँदै स्वर्ण हात पारिन । यस्तै पुरुषमा इन्द्रबहादर श्रेष्ठले रजत हात पारे । ६६ केजी मुनीको तौल समुहमा इन्द्रले पाकिस्तानका खेलाडीलाई हराउँदै
विद्यार्थीलाई ट्रकले ठक्कर दिएपछि कोहलपुर तनावग्रस्त
नेपालगन्ज । ट्रकले बिद्यार्थीलाई ठक्कर दिएपछि बाँकेको कोहलपुर अहिले तनावग्रस्त बनेको छ । आइतबार बिहान साढे १० बजेतिर कोहलपुरबाट नेपालगन्जतर्फ आउँदै गरेको ना२ख ९४५९ नम्बरको ट्रकले स्थानीय त्रिभुवन माध्यामिक बिद्यालयको कक्षा ७ मा अध्ययनरत छात्रा प्रकृती चन्दलाई ठक्कर दिएपछि आक्रोशित भएका विद्यार्थीले
काठमाडौं । भारतको तेलंगना राज्यको राजधानी हैदरावादमा भएको एक महिला डाक्टरको सामूहिक बलात्कार र हत्याका चार अभियुक्त ६ डिसेम्बर बिहानै ‘इन्काउन्टर’का नाममा प्रहरीको गोलीबाट मारिए। जसलाई अधिकांश भारतीयले ‘वीरतापूर्ण’ भन्दै प्रशंसा गरेका छन्। तर, भारतमा यस्ता व्यक्तिहरूको पनि कमी छैन जसले
साग क्रिकेटमा नेपालको फाइनलमा पुग्ने सम्भावना कायमै
काठमाडौं। करण केसीको आक्रमक ब्याटिङप्रेरित नेपालले आज माल्दिभ्सलाई ८४ रनले हराउँदै १३औं दक्षिण एशियाली खेलकुद (साग)को फाइनल पुग्ने सम्भावना कायमै छ। जितसँगै नेपालले ३ खेलबाट ४ अंक जोडेको छ। नेपाल तेस्रो स्थानमा छ। नेपालले फाइनलमा स्थान पक्का गर्न अब भोलि, बंगलादेशलाई हराउनुको विकल्प छैन। दुई
१३औं साग महिला क्रिकेटः नेपाल श्रीलंकासँग पराजित
काठमाडौं। श्रीलंकालाई ४१ रनको लक्ष्य सुम्पिएपछि महिला क्रिकेटमा नेपालको स्वर्ण पदकको सम्भावना समाप्त भएको छ। १३औं दक्षिण एशियाली खेलकुद (साग)अन्तर्गत पोखरा रंगशालामा भएको समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपाल श्रीलंकासँग पराजित भएको हो। टस जितेर ब्याटिङ गरेको श्रीलंकाले निर्धारित २० ओभरमा सात विकेट गुमाएर
१३ औं साग : गल्फमा नेपाललाई थप २ स्वर्ण
काठमाडौं । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग अन्तर्गत गल्फमा नेपालले २ वटा स्वर्ण पदक जितेको छ । गोकर्ण गल्फ कोर्समा शुक्रबार नेपाललाई सुवास तामाङले टिम इभेन्ट्स र व्यक्तिगत स्पर्धामा स्वर्ण पदक जिताएका हुन् । सुवासले अन्तिम दिन ३ अन्डर ६९ स्कोरसहित कुल १५ अन्डर २७४ स्कोरसहित प्रथम स्थान हासिल गरे
कर्मचारीका कारण संघीय व्यवस्थामै चुनौती : प्रचण्ड
काठमाडौं । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कर्मचारीतन्त्रले परिवर्तनलाई आत्मसाथ नगर्दा संघीय व्यवस्थामै चुनौती देखापरेको बताएका छन्। आज धनगढीमा सुदूरपश्चिम वित्तीय सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै दाहालले राजनीतिक परिवर्तनसँगै पुरानो राज्यव्यवस्थामा काम गरेका कर्मचारीलाई विदाई गर्न नसक्नु ठूलो कमजोरी
काठमाडौं। भारतको हैदराबादमा भएको बहुचर्चित बलात्कारको घटनामा पक्राउ परेका चार जना अभियुक्त प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिएका छन्। हैदराबाददेखि ५० किलोमिटर पर महबुब नगर जिल्लाको चटनपल्ली गाउँमा इन्काउन्टर भएको हो। तेलंगना प्रहरीका एडीजी जितेन्द्र नेका अनुसार आज बिहान ठिक तीन बजे चारै अभियुक्त इन्काउन्टरमा
५ हजार मिटर दौडमा गोपीचन्द्र पार्कीले जिते स्वर्ण
काठमाडौं । साग अन्तगर्त एथ्लेटिक्समा आज पाँच हजार मिटर दौडमा नेपालले स्वर्ण जितेको छ । त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालाको सिन्थेटिक ट्रयाकमा भएको दौडमा नेपाली धावक गोपी चन्द पार्की १४ मिनेट ६४ दशमलब २० सेकेण्डले निर्धारित दुरी पुरा गर्दै पहिलो भएका हुन् । यस्तै भारतका सुनिल दावा १४ मिनेट ५५ दशमलब २१
१३ औं साग, आज २३ खेल हुँदै
काठमाडौ । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद अन्तर्गत आज पनि विभिन्न २३ वटा खेलहरु हुँदैछन् । काठमाडौ, पोखरा र जनकपुरमा शुरु भएको प्रतियोगिता अन्तर्गत खेल हुन लागेका हुन् । आज आर्चरी, एथ्लेटिक्स, बास्केटबल,ब्याडमिन्टन, क्रिकेट,गल्फ, ह्यान्डबल, कब्बडी, साइक्लिङ, पौडी, सुटिङ, टेबलटेनिस, टेनिस, बिच भलिबल, भारोत्तोलन,
साग सञ्चालनको पाँचौं दिन सम्म कसको पदक कति ?
काठमाडौं । काठमाडौं, पोखरा र जनकपुरमा अहिले १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद जारी छ । प्रतियोगितामा २६ खेलका २८ इभेन्ट सामेल छन् । औपचारिक उद्घाटन भएको पाँचौं दिनसम्म १३५ स्वर्ण पदकको छिनोफानो भएको छ । कुल ३१७ स्वर्णमध्ये १३५ स्वर्णको छिनोफानो हुँदा भारत ६२ स्वर्ण पदकका साथ शीर्ष स्थानमा रहेको छ । भारतले
९ दिन लामो अस्पताल बसाइपछि प्रधानमन्त्री बालुवाटार फर्किए
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नौ दिन लामो अस्पताल बसाइपछि विहीबार अस्पतालबाट प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार फर्किनु भएको छ । अघिल्लो मंगलबार एपेन्डिसाइटिसको समस्या भए पछि प्रधानमन्त्री ओली अस्पताल भर्ना भएका थिए । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार प्रधानमन्त्री दिउँसो
गलकोट । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूह, युवा सङ्घ बागलुङका सचिव २१ वर्षीय रमेश अविरल भनिने सहल सुनार पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको सादा पोशाकका प्रहरीले गलकोटबाट बुधबार सुनारलाई पक्राउ गरेको बागलुङका प्रहरी उपरीक्षक नवराज भट्टले जानकारी दिए । सुनारको साथबाट विप्लव समूहसम्बन्धी
प्रधानमन्त्रीको भिडियो सन्देश‘मेरो स्वास्थ्य सुधार हुँदै छ’ (भिडियोसहित)
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्पतालबाटै आफू स्वस्थ रहेको जानकारा दिएका छन् । सोमबार बेलुका मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरबाट भिडियो सन्देश मार्फत उपचाररत प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य सुधार हुँदै गएको बताएका छन् । आफूलाई एक्कासी एपेन्डिसाइटिस भएकाले
नेपालले पहिलो पटक ट्रायथलनमा स्वर्ण जित्न सफल
काठमाडौं । सागको ट्रायथलनमा नेपाली खेलाडी सोनु गुरुङले स्वर्ण जितेकी छिन । पोखरामा भएको इभेन्ट्समा महिलाको इलाइट स्प्रिन्टमा उनले उपाधि जित्न सफल भएकि हुन । ट्रायथलनमा नेपालले पहिलो पटक सागमा स्वर्ण जितेको हो । सोनीले एक घण्टा १३ मिनेट ४५ सेकेण्डको समय निकाल्दै स्वर्ण हात पारिन । दोस्रो र तेस्रो स्थानमा
धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेसका तिलक राई विजयी
काठमाडौं। धरान उपमहानगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसका तिलक राई विजयी भएका छन् । भर्खरै सकिएको मतगणना अनुसार उनले २६ हजार ७०९ मत प्राप्त गरे। निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेकपाका प्रकाश राईले २३ हजार ९१४ मत प्राप्त गरेका छन्। दुईजनाबीचको मतान्तर दुई हजार ७९५ रहेको छ। २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा
खो–खोमा नेपालको दोहोरो जित
काठमाडौं। दक्षिण एशियाली खेलकुद (साग)को १३औं संस्करण अन्तर्गत खो खोमा नेपालले दोहोरो जित निकालेको छ। खो–खोमा पहिलो दिन नेपालको पुरुष र महिला दुवै टोलीले विजयी नतिजा निकालेको हो। कीर्तिपुरको नयाँबजारमा सम्पन्न खेलमा पुरुषतर्फ नेपालले बंगलादेशलाई २१–१९ को स्कोरमा पराजित गरेको हो। महिलातर्फ
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को २२ औं स्थापना दिवस तथा अवार्ड वितरण
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालले वित्तीय क्षेत्र लोकलाइजु नभइ ग्लोबलाइजु हुने बताएका छन्। उनले वित्तीय क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन विश्वमा भएका अभ्यासहरूलाई पनि लागू गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिहरू त्यसैको पृष्ठभूमि रहेको समेत बताए। उनले
मोदीले पठाए प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वास्थ्यलाभको सन्देश
काठमाडौं। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यलाभका निम्ति शुभकामना सन्देश पठाएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पत्रमार्फत् सन्देश पठाएर प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आज जारी
नेपाल प्रहरी अपराध अनुसन्धानमा अब्बल छ : महानिरीक्षक खनाल
काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न तथा अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरी अब्बल रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् । समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत स्नातकोत्तर तहका विभिन्न संकायका विद्यार्थीहरुबीच
कास्की अपडेट विद्या : १५५४१, खेमराज : ७१९६
काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचन अन्तर्गत कास्की क्षेत्र नं २ मा नेकपाकी उम्मेदवार विद्या भट्टराईले अग्रता बढाउँदै लगेकी छिन्। नेकपाकी उम्मेदवार भट्टराईले १५ हजार ५४१ मत प्राप्त गरेकी छिन्। नेपाली कांग्रेसका खेमराज पौडेलले ७ हजार ९९६ मत ल्याएका छन्।
सागको उद्घाटनसँगै आज चार खेल हुदै
काठमाडौं । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) को औपचारिक उद्घाटन आज (आइतबार) हुँदैछ । त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा साँझ विशेष कार्यक्रमकाबीच सागको उद्घाटन हुनेछ । सागको उद्घाटनसँगै आइतबारबाट विभिन्न खेलहरुको प्रतिस्पर्धा सुरु हुनेछ । भलिबल खेल भने बुधबारबाट सुरु भईसकेको छ । सागको
उपनिवार्चनको पछिल्लो अवस्था बारे निर्वाचन आयोगको प्रेस विज्ञप्ति
काठमाडौं । उपनिवार्चनको पछिल्लो अवस्था बारे निर्वाचन आयोगले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत हालसम्मको परिणामको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सागको औपचारिक उद्घाटन आज
काठमाडौँ । १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सागको औपचारिक उद्घाटन आज हुदैछ । दक्षिण एसियाली खेलकुदको सबैभन्दा ठुलो खेल महोत्सव नेपालमा आज सुरु हुन लागेको हो । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भव्य समारोहकाबीच सागको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको